Ndị na-eweta ngwongwo na-ebu agha, na-emeputa igwe eletriki & PRR Pipers | Shinfong
Guzosie ike na 1996, Shingfong bụ onye ọkachamara na-emepụta PVC Trunking, PVC Conduit, PPR Pipes and fittings
Nkwado ụlọ ọrụ
Companieslọ ọrụ otu
PVC Arc ala
PVC Messlọ Ọrụ
PVC na-agbanwe agbanwe
PVC Vonit Sprish
PRR na-ekpo ọkụ na mmiri oyi
PVC na PPR ngwa
Onye nrụpụta ọkachamara nke
PVC KPRING, PVC, PRR PIP, ngwa.
Ọ bụ obere ihe na-eme ọdịiche
Kachasị mma mma ọkachamara na-emepụta ihe nkiri PVC
Shinfong kacha mma nke ndị na-emepụta ihe nkiri PVC na-emepụta ihe nkiri, Shinfong nwere 4PC nke Forklift, anyị na-enwe ike ibu ibu 5 x 40HQ n'otu ụbọchị.Ndị na-emepụta PVC na-emepụta ihe.Emechaala ya na usoro ihe achọrọ nke ụkpụrụ mba ụwa, enwere ike ekwe omume n'ihi na ọ gaferela ọtụtụ mma.Shingfong's PVC na-egwuri egwu bụ ngwọta zuru oke maka nrụnye ọrụ ọrụ ọrụ USB, gụnyere ụlọ na azụmahịa na azụmahịa. A na-akwado ngwa ngwa achịcha na-akwado ya maka ịmịkọrọ na-achọghị na eriri. Enyere ya n'ihe karịrị narị abụọ na ọkpụrụkpụ na ọkpụrụkpụ. Ha dị ọtụtụ ngwa na ihe. Iji ogwe osisi a, na mgbakwunye, ọ bụ ihe amamihe dị na iji kposara na plọg mgbidi maka ụfọdụ ngwa ụfọdụ.
Intro na-ere ahịa PVC PVD COND CONDINT na ezigbo ọnụahịa Shangfong
Shingfong intro na-ere ahịa na-efe efe na ezigbo ọnụ ahịa na-enweghị isi, Shinfong nwere 30 usoro nrụpụta na-ewu ewu, bụ ihe na-emepụta kwa afọ bụ 20,000tons.Chọta PVC Fly-Rolling Confuit Eluigwe Na-akpata Nsogbu? A na-ahụkarị PVC Cond Cond Condsing, anyị pụrụ iche na paịlị mmiri PPR na oyi, lelee ugbu a!
A na-eji ụgbọ elu PVC dị elu - Saịhui Shinfong Blotlọ ọrụ Play CO., LTD.
Shinfong dị mma PVC Condotive Pọtịtụ - Saịhui Shinfong plastik Productory Tectory Tect Play Home., LTD., Shinfong nwere ọnụọgụ PVC kachasị ukwuu, site na min. 10x10mm na 200x100mm. Ihe karịrị narị puku abụọ na nhata.PVC Condon Condoit
China kacha mma PVC ARC dị n'ụwa na-emepụta ụlọ ọrụ mmepụta ọrụ - Shinfong
Shingfong China kacha mma PVC ARC ala ụlọ ọrụ - Shinfong, Shinfong Service dị, maka usoro PVC Plan, anyị nwere ike ịme ebu ọhụụ.Jụọ na ntanetị! PVC ARC ARC n'ala ụlọ, nkọwa gbasara PVC GRC ala, PVC kacha mma site na ụlọ ọrụ ngwaahịa plastik plastik
Ndị na-emepụta PVC Hearslọ Ọrụ
Shingfong ọkachamara na-emepụta ihe, Shingfong guzobere na 1995, ọ nwere afọ 26 na-emepụta PVC Plan, PPR na-ekpo ọkụ na mmiri mmiri pọmpụ.PVC ala
Intro iji kọmputa na-emeghe PVC ghere egwe na-ejikọ site na China Shinfong
Shingfong intro iji emepụta PVC Complers site na China Shinfong, Shinfong nwere otu talent nke r&D, o nwere nsọpụrụ ịnata akwụkwọ ndenye ụlọ ọrụ na mba.Na-achọ onye na-eweta PVC? Shinfong Pụrụ Iche na Omenala Omenala nke mere PVC Okpokoro, lelee ugbu a!
Ndị na-emepụta PVC ahaziri iche na China
PVC ogigeShingfong kọmpụta nke PVC Companing na-emepụta ihe sitere na China, Shinfong nwere 4PC nke Forklift, anyị na-enwe ike ibu otu akpa 5 x 40HQ n'otu ụbọchị.
Ndị na-ere ahịa na China ahaziri ha
Shingfong ahaziri iche na China, Shinfong na-ekpuchi ebe 25,000 m², nwere osisi abụọ nke nsogbu, 3 ụlọ nkwakọba ihe yana ụlọ ọfịs.Nkọwapụta ngwaahịa 1) Ihe: PVC. 2) Standardle: en 61357: 2007. 3) Afactoce: elu dị larịị na-enweghị ọkọchị ọ bụla, agba mara mma na kenkowaputa, nkwakọ ngwaahịa dị mma. 4) Jiri: Maka ijeri nke ime, na-echebe waya n'okpuru 1200v. 5) Mmetụta: Mgbe ị na-eji, ị ga-eji mfe na nke na-eme ihe, na-etinye na ntụkwasị obi, ọ dịkwa mma maka ịnọgide na-eme ma na-achọ. 6) Ndụ: ndụ nkịtị nwere ike iru afọ iri ise. 7) ojiji: eletriki ma ọ bụ owuwu. A na-eji ọmarịcha ụlọ na ọ dabara adaba maka mpaghara ọha ọ bụla, na-eji ya maka nrụnye ekwentị, eriri na netwọk ịkparịta ụka n'.gFụ. Ime ka a na-ewu ewu maka Hallslọ Nzukọ, ọfịs na ụlọ ahịa na ebe a na-ere ahịa na ebe mgbatị ahụ, ụlọ ahịa ngalaba, ụlọ ahịa na ọnọdụ ọha na eze ndị ọzọ. Isi atụmatụ 1) Ihe isi ike: Ọ bụrụ na ị ga - adịrị gị mfe ịgbaji. 2) Ihe isi ike: n'okpuru ike nrụgide, mmetụta ndị dị elu na-eguzogide. 3) Ọkụ na-eguzogide ọkụ: ire ọkụ-PVC resin, a na-ere ere - azụ, na-eme ngwa ngwa. 4) Gordosion nguzogide: mmiri, acid na mgbochi Acce, na-emesi ike na-akwụ ụgwọ dị ala na ndụ dị ogologo. 5) Nkwekorita: ezigbo mkpuchi eletrik, nke na-agbanwe voltaji 25kv, na-egosi usoro dị mma. 6) Nwụnye: mfe imeghe ma mechie, diski adaba na ciment ciment na njikọta na-eri.
Eriri ahịrị na ezigbo ọnụahịa - Shingfong
Shingfong ahịrị eriri ọgbụgba na ọnụahịa dị mma - Shinfong, Shinfong City, ọ na-ewere 90mins site na ọdụ ụgbọ elu mba ofesi n'ụlọ ọrụ anyị. Ọdụ ụlọ ọrụ anyị dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Guangzhou na ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen.1) Shingfong PVC Consot Consotit bụ tube nke na-eji chebe ma na-agagharị eletriki na ụlọ ma ọ bụ ihe owuwu. 2) Shingfong PVC Shingfong Connon to todị abụọ: tonzọ na-enweghị ike na-agbanwe agbanwe. 3) Shingfong PVC na-enye ezigbo nchebe iji kpuchie ndị na-eduzi ya na mmetụta, mmiri, na vaporation vapo. 4) Shingfong PVC WVE nwere ike itinye n'okpuru ala n'etiti ụlọ, ihe owuwu, ma ọ bụ ngwaọrụ iji nyefee ike nke ike na eriri nkwukọrịta. 5) E nwere ihe eji eme ihe eletriki eletrik nke enwere ike iji jikọọ na Shingfong PVC. Njirimara PVC Condit 1) Mmetụta na nrụgide na-emetụta; 2) enwere ike lie ya na ihe; 3) A na-eme ka ịka nká na enweghị ike ịgbanwe; 4) Damproof, iguzogide acid na alkali; 5) Ozugbo ọ na-apụ n'ọkụ, ọkụ na Shinfong PVC Condonge na-anwụ ozugbo; 6) Nga anya dị iche iche dị adị; 7) Ije ozi OEm na Odm jere; 8) ụdị abụọ dị iche iche: PVC kwụ ọtọ, pvc oyi na-agbaransị.
Kacha mma PPR Pipe N'ihi Cold na Hot Water FactoryPrice | Shingfong
Ezigbo PF Pic maka imepụta mmiri oyi na ọkụ, nkọwa gbasara PR Pipe maka mmiri oyi na mmiri ọkụ
Ndị na-emepụta PRR TOTE - Shinfong
Shinfong China PRRO TUBE - Shinfong, Shinfong nwere ndị ọrụ 150, anyị na-enwe ike ịrụ ọrụ n'oge dị mgbagwoju anya, ọbụlagodi na ngwugwu dị mgbagwoju anya.Uru: (1) Ọnọdụ okpomọkụ dị elu: Oke nke na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike ruru ogo 70 Celsius, Ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị ruru 95 ogo Celsius. (2) Nchịkwa ọkụ dị ọkụ: Ọnọdụ ọkụ ọkụ dị ala bụ naanị 1/1500 nke ọla kọpa, na 1/250 nke ọkpọkọ. Ọ bụghị ihe na-egbu egbu: Ọ dịghị ihe mgbakwunye ndị na-eme ka ihe ruru unyi kpuchie ya ma ọ bụ nke nje. (3) corrosion na-eguzogide: Guzogide kemịkalụ kemịkalụ ma ọ bụ kemịkalụ Electron. (4) Ntinye windo dị ala: Ibu ọkụ na ịdị mfe nke nrụnye nwere ike belata nrụnye site na 50% karịa sistemụ ọla. (5) ike dị elu dị elu: Akwa ime ụlọ dị mma na-ebute ọnwụ na-akpata ala ma dị elu karịa ọkpọkọ ọla. (6) ogologo ndụ: Ihe karịrị afọ 50 n'okpuru ọnọdụ nkịtị. (7) recycled na gburugburu ebe obibi.
Kasị mma China PVC na-egwuri egwu na ọnụahịa ụlọ ọrụ na-achọsi ike - Shinfong
Shinfong kacha mma na ụlọ ọrụ PVC PLACK ụlọ ọrụ na ọnụahịa nrụpụta nke ọma - Shinfong, Shinfong nwere ezigbo ọrụ iji nye mba ndị na-akwụ ụgwọ ma nwee ihe karịrị narị mba 70 dị iche iche.Nkowa 1) Ihe: Ihe PVC ohuru 2) ọkọlọtọ: iEC 61084-2-1-1-1-1 3) Afactoce: Dray, enweghị adịghị ọcha, nkwakọ ngwaahịa mara mma. 4) Agba: Agba dị ọcha, enweghị discololoration na ịka nká. 5) Isi: Onweghị isi, gburugburu ebe obibi. 6) Jiri: Maka ijeri nke ime, na-echebe waya n'okpuru 1200v. 7) Mmetụta: Mgbe ị na-eji, ị ga-eji ngwa ngwa na nke na-eme ihe, na-etinye ntụkwasị obi, adaba maka ijigide na-achọ ma na-achọ. 8.
Akwa PVC dị mma na-acha uhie uhie
Akwa PVC dị mma na-acha uhie uhie• ogologo ogologo: 2000mm• agba agba: ọcha• Nye nnukwu nchebe• ujo na-eguzogide na-eme ka ihe ọkụkụ na-efe efe• Ihe-efuAgwara• Ejikọtara ya na liners na mkpuchi pụrụ iche na-eme ka ị na-eme ka ihe mkpuchi kpuchie ya ma ọ bụ n'oge mkpọtụ;• nkuku na nku nke na-agaghị aga ma ọ bụ kpasuo ya iwe;• Ihe eji eme ihe PVC Pụrụ iche na-ezute ihe ndị na-ere ahịa.
Ọkachamara pvc arc ala nke nwere ihe na-emepụta ụlọ
Ọkachamara ọkachamara 11 pvc Ala ala na-emepụta ụlọ.Ọrụ ya zuru oke na ndụ ya na ndụ ya.Shingfong PVC ARC ala na-agbaze teepu dị elu nke nwere oghere, nke kachasị na-adịgide adịgide, dị ka ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ, na ọdụ ụgbọ mmiri.Enwere ike itinye aka na teepu nke ejikọtara ọnụ wee mechie ala dị mfe.
PVC kacha mma na ngalaba ogige
PVC kachasị mma na ngalaba ogige.A na-ezukọ ngwaahịa ahụ.Shinfong's PVC ogige bụ otu ngalaba ụlọ,nke enwere ike ibute ya site na iji nke ekenye iji nabata ike, data na telecommunionication. Ọnọdụ nke isi ihe ndị na-eme ka ọ dị mma na-ahapụ ka edoa ya abụọ, atọ ma ọ bụ anọ na-adabere na nwụnye chọrọ.
Onye na-ebubata PPR kacha mma na nke kachasị mma
Onye na-ebubata ya kachasị mma na mmiri.Ngwaahịa a dị mma iji. A na-emepụta ya dị ka mmiri ọ drinkingụ drinkingụ jiri ụkpụrụ nchekwa.1. ECO-ECEFT na SEFERS, Ichekwa ume2. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu, na-eyi iguzogide, mmetụta iguzogide3. Ìhè dị mfe, usoro dị ala na ụgwọ mmezi4. Ndụ Ezigbo Ozi
PVC PVC na ndị na-emepụta teepu
Ọkachamara PVC na-emepụta ihe na-emepụta teepu.Principleskpụrụ omume nke gụnyere akụkụ ndị a. Principleskpụrụ ndị a gụnyere usoro nhazi nke na-ahụ anya, ihe atụ, ịdị iche iche, dịgasị iche iche, ndị isi, na nha.Mpempe akwụkwọ ngọngọ ndị a nwere akụkụ abụọ dị elu, akụrụngwa nke teepu na-esite na South Korea. E nwere ọtụtụ agba ịhọrọ, dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, wdg.Anyị nwere ndị otu nwere nkà ka anyị tinye teepu nrapado na PVC, anyị nwere ike rụchaa ngwongwo n'oge. N'oge dị otú ahụ, anyị nwere ike ikwe nkwa maka oge nnyefe. Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ PVC Plan na teepu abụọ.
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ PVC kachasị mma -
Ọnụahịa ụlọ ọrụ PVC kacha mma -.E jiri nlezianya zụlite ya. A na-eme ya site na ndị otu R & D nke na-ewere ọtụtụ ihe n'ime echiche ndị dị ka mmegharị ahụ na-eche echiche, pustanications (igwe eletriki), na eletriki, wtrol.CVC Connit nwere nha ndị a:10mm PVC Sengiit, tumadi maka iji ihe ọkụ dị ọcha mere, anyị na-akpọkwa ya na-edube.16mm, enwere ụfọdụ agba dị maka ọkpọkọ PVC, nke awọ, isi awọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ojii, odo, odo, wdg.20mm, kacha mara mma, na-ere nke ọma n'ụwa niile25mm, ihe nlere anya na-ere ọkụ, ọ nwere ngwa ndị metụtara ya32mm, ezigbo mma40mm,50mm,60mm,Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị: Mbupụ@shingfong.com
Still ka na-egbu oge na ngwugwu PVC? Nke a bụ ihe ị ga-eme kama
Still ka na-egbu oge na ngwugwu PVC? Nke a bụ ihe ị ga-eme kamaNa vidiyo a, aga m egosi na ị ka na-egbu oge na PVC na-egwuri egwu? Nke a bụ ihe ị ga - eme. Ọ dị mkpa maka mmadụ niile ịghọta ka ị ga-esi na-egbu oge na PVC na-egbu? Nke a bụ ihe ị ga - eme. Nwee obi ụtọ na ịdenye aha vidiyo a!Chọrọ More? Lelee HTTPS m://www.shingfong.comShing Shingfong Platlọ ọrụ Play Play Houplọ ọrụ Poly Co., bụ ihe ndị na-emepụta ọkachamara na-etinye aka na nnukwu polymer ihe, ihe ndị dị mkpa na-etinye ọnụ, PVC-u drainage pipes na ngwa ndị ọzọ metụtara ya.E guzobere Shinfong na 1996, nke dị na No. 68, Vingdong Road, Dongcheng City, Guehui City, na-ekpuchi mpaghara 38.8. Shinfong nwere usoro mmepụta nke 30 akpaka, ikike imepụta afọ 30,000, site na uru mmepụta nke 200 nde Yuan 200 nde ma ọ bụ karịa.Email: Mbupụ@shingfong.comBụrụ enyi m:Lelee ebe nrụọrụ weebụ m: https://www.sshingfong.comTinye m na Facebook: https://www.facebook.com/11224917063505Tinye m na YouTube: https://www.yoube.com/channel/ucie3Cabchrytvvv16vuStill ka na-egbu oge na ngwugwu PVC? Nke a bụ ihe ị ga-eme kamaBiko kpọtụrụ anyị ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.# dome # bela # # pvc # pvc # na-anyụ # & # SFPVCTRUNKET & Contockingge # Bikepanking # cimentSonetspvccvcvc
Aha abụọ dị elu nke teepu Ahịrị abụọ maka ndị na-emepụta PVC na China
Shingfong Khazi akara dị elu nke teepu Ahịrị abụọ maka ndị na-emepụta PVC na ChinaNdị a bụ gluu pụrụ iche eji eme ihe mgbochi, e ji nrapado si na nrapado mee ka ihe nile di nma.Enwere agba dị iche iche dị maka mkpuchi teepu nrapado, dị ka ọcha, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ, odo, oroma, odo, witt.A na-anabata agba edoziri aha.Agba nke teepu na-acha ọcha ma ọ bụ ojii.Obosara ha na-eme. 7mm max. 85mm.Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị: Mbupụ@shingfong.com
Arụmọrụ ị nwere ike ịtụkwasị obi
SHIHUI Shingfong plastictory ụlọ ọrụ Delọọslọ Ọrụ CO., LTD.
Shingfong onye ọsụ ụzọ na eriri eletrik& Wireing truncking, eriri ọkpọkọ, mmiri na-enye ọkpọkọ, igbapu pipe na fittings ndị dị mkpa. E guzobere n'afọ 1996, anyị na-ere pipe pipe na ogwe osisi na-aga ihe karịrị obodo 150 n'ụlọ na nke ezi obi na ogo a pụrụ ịdabere na ya. Uru na-aba n'anya: Anyị raara onwe anyị nye iji mee ngwaahịa dị elu na ọnụahịa akụ na ụba iji mee ka ị bụrụ asọmpi n'ahịa gị. Obi dị anyị ụtọ na anyị ga-eme ngwaahịa iji zute nkọwapụta gị. Anyị nwere ike ịme ka aha ngwaahịa nke nwere ike inyere aha akara gị aka inweta ahịa. Ntọala dịgasị iche iche nke ịba ụba, ogwe a ...
E guzobere na 1995, Shinfong nwere ahụmịhe ọkachamara 26 na-arụ ọrụ PVC Clock na PVC Condon Security
Ikike mmepụta afọ 30,000, na-ebunye opekata mpe 50x40GP
Kpuchie mpaghara 25,000 square, ihe omumu 2 na 3 Washouses, 30pc akpaka akpaaka
Oem / Odm profaịlụ. Ọrụ Nhazi nke ngwugwu.
Ọrụ, ịdị mma & ịkwụwa aka ọtọ
Shinfong na-enyere ndị ahịa ya mgbe niile na ngwaahịa dị ọnụ ala, nnukwu ngwaahịa na ezigbo ndị ahịa. Nchịkwa otu nkwụsị, gụnyere ọrụ nyocha dịka mkparịta ụka ndị dị ka mkparịta ụka azụmaahịa dịka mkparịta ụka azụmaahịa, nyocha nke ahịa, a na-enye ọrụ Nkwado na nkwa dị mma, a na-enye ọrụ ndị a niile.
: Ikwesị ntụkwasị obi, uru.
Nzube Shinfong: Iji nye ngwaahịa dị elu na ọrụ dị mma.
Ebumnuche Shinfong: readitation nke ụlọ ọrụ, ịrụ ọrụ nke ọma, melite ndị ọrụ ndụ.
Presskpụrụ Shinfong: Jiri aka na-agbaso ụkpụrụ mba ụwa nke ISO9001, guzobere ma na-eme ka usoro ngwaahịa na ọrụ mee ka usoro ngwaahịa na ọrụ.
Ụlọ ọrụ na-eduzi
Onye na-emepụta ọkachamara kemgbe 1995
Igwe eji eji eme ihe na PVC Sking na PVC
Ibelata minit. 50x40HQ
Nye ọrụ OEM / ODM
Ihe karịrị narị abụọ dị iche iche maka OEM
Osisi na-ese ihe
Ntụziaka ndị ọkachamara na-eduzi Shingfong Pvc na-agagharị maka sistemụ kpo okuHey Guys! Taa, aga m egosi gị gbasara ndị ọkachamara na-eduzi Shingfong PVC na-agagharị maka sistemụ kpo oku. Lezie anya ka ị mụta gbasara ndị ọkachamara na-eduzi Shingfong Pvc na-ekpuchi sistemụ kpo oku echefula echefula vidiyo a!Shing Shingfong Platlọ ọrụ Play Play Houplọ ọrụ Poly Co., bụ ihe ndị na-emepụta ọkachamara na-etinye aka na nnukwu polymer ihe, ihe ndị dị mkpa na-etinye ọnụ, PVC-u drainage pipes na ngwa ndị ọzọ metụtara ya.E guzobere Shinfong na 1995, nke dị na Mba 168, Vingdong Road, Dongcheng City, Guhui City, na-ekwupụta mpaghara 38.8. Shinfong nwere usoro iri atọ nke usoro mmepụta akpaka, ikike imepụta afọ 30,000, site na uru mmepụta nke USD30 nde ma ọ bụ karịa.Email: Mbupụ@shingfong.comGbaa mbọ hụ na ị gwa gị:Lelee ebe nrụọrụ weebụ m: https://www.sshingfong.comTinye m na Facebook: https://www.facebook.com/11224917063505Tinye m na YouTube: https://www.yoube.com/channel/ucie3Cabchrytvvv16vuGbakwunye m na Linkeddin: https://www.linkedin.com/in/sf-pvc-pvc-pvont-conduitNtụziaka ndị ọkachamara na-eduzi Shingfong Pvc na-agagharị maka sistemụ kpo okuBiko kpọtụrụ anyị ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.# Ọkachamara # Ntụziaka # Shingfong # PVC # CVOTEMCEEDETHAVETHAVETHAVETERSTEETHAVETHAVETANCETANCETANCETANCETANCETANCEMSTISTEMSTISTEMSYSTEMSTEMSTEMSTEMSTEMSTEMSTEMSTEMTEMS
CVC PVC Electrical Ogwe ọkụ-sihui Shingfong plastictory ụlọ ọrụ Co., LTD.
Shingfong Cussonal Cusquality PVC Electrical Ogwe ọkụ-sihui Shingfong plastictory ụlọ ọrụ De., LTD.
Intro na PVC USP CAGH CONGHING SHing
Shing Fong intro na PVC USP CAGH CONG
Kachasị mma chọrọ maka Ememe Entern na-ebuga ya site na ndị na-eweta Shinfong
Shingfong kacha mma maka ememme Lantival site na ndị na-eweta Shinfong